AKHRISO: Deni & Axmed Madoobe oo shuruudo fulin u baahan hordhigay madaxdii ku heshiisey.
May 30, 2021 Xuseen 7
Puntlandtimes (Muqdisho)-Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo khudbad ka jeedinayey xiirtaanka shirka Muqdisho ayaa dhawr qodob oo muhiim ah hordhigay madaxda kala duwan ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo guud ahaan umadda Soomaaliyeed.
1: In dagaal wadajir ah lala galo malayshiyaadka Alshabaab ee ka dagaalamay qaybo kamid ah Soomaaliya.
2: In loo diyaar garoobo kaalin wayna laga qaato dibu-heshiisiin qaran oo ay u dhanyihiin dhammaan umadda Soomaaliyeed.
3: In la soo celiyo wadahadaladii Soomaaliya iyo maamulka Somaliland
Dhnaka kalena, madaxweynaha dowladda Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in loo baahan yahay isku duubni iyo tanaasul dheeraad ah, wuxuuna sheegay in heshiiska maanta iyo hiigsiga Soomaaliya aan la gaari karin haddii aan laysku duubnaan.
* THIS IS MORE IMPORTANT *
Dabcan, dad badan oo macnaha dhabta ah ee dawladnimada hannaanka federaaliga ah ka arradan ayaa wixii Xamar ka-dhacay siyaabo qaldan umaldahday oo dawladnimada gebigeedaba uhaysta inay tahay shakhsi ay “reer-hebelnimo” wadaagaan oo xilka madaxweynaha dalka ee loo igmaday haya. Annaguse waa inaynu fahamsannahay inay dawladnimadu aad ugaweyntahay shakhsi mise labo kursi xun kufadhiya.
Doorasho iyo la’aanteedba, waaqicigu wuxuu markasta yahay inay dawladnimadu aakhirka iskugu biyoshuban doonto qaabka uu hannaanka federaaligu sida dabiiciga ah iskugu-dubbadhaco oo ushaqeeyo: waana awoodda dawliga oo ukaladhici doonta saamiggalka maamulka federaalka iyo maamullada shacabka tooska umetelaya ee qiyaastii noqonaysa 30% – 70% . Taasu macnaheedu waxaa weeye in ahamiyadda iyo miizaanka dawligu ay dhanka maamullada shacabka metelaya ubadnaan doonaan oo nadaamkuna uu saldhigan doono.
Waxaa waaqicigan inooga dhex muuqda in sikasta oo aynu dawlad dallad ah heerka qaran kuwadaagi doonno uu maamullada iyo geyiyada ay metelayaan kadhex qarxi doono tartan xooggan oo loogubaratami doono dawlad-wanaagnimada; tayeynta tacliinta iyo aqoonta; soojiidashada maalgeshiga guud; xoojinta waxsoosaarka berriga iyo baxarka; sare-uqaadidda dhaqaalaha iyo maaliyadda; iyo horumarka baahsan ee intaas oo dhan salka kuhaya. Waxayna ishaaraha iqtisaadigu tilmaamaan inay libinta tartanka noocan ah toos uraacdo geyiyada iyo shucuubtooda kaabayaasha dhaqaale aadka ugu istraatijisan.
Haddaba, shucuubta labadan geyi ee istraatijinimada iyo siyaabo kastaba kumataaneysan waa lagamamaarmaan inay dhaadaan qiimaha ay ugufadhido inaan tartankaas sina loogahormarin, balse ay iyagu dalka intiisa kale kagasii hormaraan. Waxaa nasoofoodsaaraan heshiisyo ganacsiyeed oo aynu shirkado iyo waddamo shisheeye heer caalami ah ukalasaxiixan doonno mustaqbalka dhow, ayna kujirto in shuruucda iyo xeerarka Ururka Ganacsiyeed ee Caalamka (WTO) loohoggaansamo oo waxna lagu kalasaxiixdo.
Sidaas ajligeeda, waxaan tolweynahaygan ku-baraarujinayaa inaan arrimahan mustaqbalkeenna muhiimka u ah laga habsaamin oo lagana gaabinin, balse xoogga iyo ahamiyaddaba qummaati loosaaro. Waxaynuna guulaha kusoohoyn doonnaa innaga oo aysan Xamar dib dambe hawlahan inooyaalla naga-habsaaminin sidii horeba wax u-dhaceen. Halaga foojignaado dhagraha daahson ee aalaaba la inagu mashquuliyo oo Xamarna lagasoo maleego.
Inta aad sheegtay oo aad tiri Axmed iyo Dani ayaa soo jeediyay waa asaaska dowladnimada somaliya dhamaantoodna waa u muhiim qaranimada somaliya waana u lagama maarmaan in la fuliyo qodobadaas, qodobadaas waxay dan u yihiin dadka iyo dalka somaliya. Halkaa waxaa ka cad in Dani iyo madoobe yihiin kuwa kaliya ee garanaya sida dalkan somaliya horay loogu wadi karo iyo halka u baahan in wax laga qabto waana ku amaananyihiin runtii.
Boqorka ha caayin.. yuusan afku ku qaloocsamin
War tan waa wax loo sheegay oo aan hadda cusbsyn ee Puntland times ma wax aad sheegtaan baad wayseen.
Deni iyo Madoobe runto waxay tahay in aysan ka soo bixin howlihii dadka gobolada ay maamulaan ka filayeen,shaki kuna jiri in ay ku guuldaraysteen dhamaan howlihiikaga filayey taa bedelkeediina ay musumaasuq iyo boob hantida dadwaynaha ay maamulaan,waxaa intaasi dheer in awoodii oo dhan ay ku kooban tahay labadooda waa Deni iyo Madoobe.
War Deni wa in aan laga aamusin shacabka reer Puntland inta goori goor tahay,haddii kale guuldaroiyinka oo gaystay ayaa mudo dheer waadanata in xaliyo.
Guul Puntland iyo horumar ijtimaaci ah oo ka fayow musuqmaasuq,eex iyo sida hadda wax yihiin oo fashil ku ah dhamaan haykalkii maamul iyo garsoor ee shacabka Puntland filanayeen.
waa wax aad uwanaagsan waxaan isleeyahay waa waxa kali ah ee ina hortaagan inaan dawlad sax ah noqono hadaan intaa lehelinna dawladnimo ma jidho